Firo Isethi Yokupheka Ngomlilo - Umagazini Design
Isethi Yokupheka Ngomlilo
Isethi Yokupheka Ngomlilo I-MOTO iseti yokupheka esebenzayo futhi ephathekayo eyi-5kg ngomlilo ngamunye ovulekile. Ihhavini inezimbiza ezi-4, ezinamathiselwe ekwakhiweni kukaloliwe wamadraki ngosizo olushubekayo lokugcina izinga lokudla. Ngaleyo ndlela iMOTO ingasetshenziswa kalula futhi ngokuphepha njengekhabethe ngaphandle kokuchithela ukudla ngenkathi kuhhavini iphakathi nendawo. Izimbiza zisetshenziselwa ukupheka nokudla futhi zisingathwa ngethuluzi lokusika eliziqeshayo ezinhlangothini zombili zamabhodwe ukuwathwala emaphaketheni okufaka okushisa ngenkathi kushisa. Kubandakanya nengubo futhi nesikhwama esiphethe yonke imishini esetshenziswayo.
Igama lephrojekthi : Firo, Igama labaklami : Andrea Sosinski, Igama leklayenti : NIMTSCHKE DESIGN - Andrea Sosinski.
Isethi Yokupheka Ngomlilo Andrea Sosinski Firo